Tacsi Ku Socota Eheladii, Ardaydii Iyo Reer Somaliland Iyo Muslimiintoo Dhan Ee Geerida Xaqa Ah Ku Timi (Ismail Ali Farah-Ismail dhubato)
(Hadhwanaagnews) Tuesday, March 13, 2018 13:01:48
nasiib waxaanu u helay in macalimkii Ismail dhubato anaga koonaa midig nooga ciyaaro anna weerar khatara oo lagu
Marka hore ilaahay Allah naxariistii janno ha siiyo macalim Ismail Dhubato. Macalim Ismail dhubato wuxuu ahaa macalim ruug caddaa ah oo waxbarashada wadanka ka dhexmuuqday muddo aad u dheer , arday aan la soo koobi karayn iyo dugsiyo aad u badan wax ka soo dhigay tacsidiisa iyo xusuustiisu waxay dhex xulaysaa waqtii aa u badan iyo dad aad u badan oo wadanka iyo adduunka daafihiisa kala jooga wax uu dad soo baray iyo dad uu la soo shaqeeyeyba. Anigu waxaan ka mid fasal uu u dhigi jiray English iyo B.E da 1972gii Iskuulka Qudhac-dheer. Maalin baa weligay madaxayga si filim oo kale ugu jirtay ,waxay
ahayd anagoo leh goor barqo xiisaddii B.E ayaanu laba tiim uu nooqaybiyey oo kubadda cagta ah , nasiib waxaanu u helay in macalimkii Ismail dhubato anaga koonaa midig nooga ciyaaro anna weerar khatara oo lagu magaabi jiray Bashe-Curri ayaan ahaa. Waxaa ciyaartaa ka mid ahay baas aan u dhigay Ismail dhubato isagoo dhinaca midig iga xigay. Wuxuu Ismail xidhnaa dharkii uu ku soo shaqo tegay oo ahaa surwaal brown ahaa oo aad u kaawiyadaysan iyo shaad iyo kabo buudha oo madaw. Ismail wuxuu macalim aad u qurux iyo hubqaad wacan oo kaftan badan ardayduna aad u jeclayd . Baaskii aan u dhigay one-two pass baanu illaa goolkii qoloda kale ku wadnay halkaana waxaan dhaliyey gool lama illaawana. Macalimkaa illaa yawnaa haddaa dib umaanu kulmin waxaanaan ku noolay dunida dabeeda laakiin picture kaasi maalintaaa weligay madaxayguu ku jiraa isagoo(sharp and vivid, it was one of the most memorable with teacher. Qof walba wuu dareemi karaa dareenkayga inaan maqlo geerida Ismail Dhubato waxay igu noqotay (nostalgic) , mar waan farxaa oo waxaan idhaa Macalim Ismail nolishiisa wacan ee dheer ee waxbarashada illaa waqtigaa ku jirtay marna muxuu u geeriyood adigoon la kulmin.
Reer Somaliland inagoo ka qani ah dad badan oo wadanka u soo shaqeeyey oo (profound experience) u leh wadanka oo ay wasiiro iyo Baarlamaano noqon lahaayeen ayey saaxadda talada ka maqan yihiin sida Ismail dhubato, waxaa kuraastaa muhiimka ah ku fadhiya kuwa Baarlamaanada fadhiyada dhexdoodii xanjo raabsanaya oon wadanka usoo shaqayn waa guul darooyinka ka jira Somaliland.
Ismail dhubato inaga guur (Allah ha u naxariisto) laakiin dad badan oo noociisa ah baa nool oo reer baynu ku waalanaye reer walba ku jira. Kuwaa Baarlamaanada inoogu dara oo qof dambe oo fadhiyada Baarlamaanada xanjo raamsanaya ha inoo soo fadhiisinina goloyaasha.
Macalim Ismail Dhubato-aamiin, aamiin